Ujeedo dabiiciga ah iyada oo loo marayo sawirka LeMay | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxaniste ayaa ku milmay boqolaal sawir si uu u sameeyo tixgalin dabeecadda
Manuel Ramirez | | Sawir, Dhiirrigelinta
Iskuduwaha Ysbel LeMay ayaa isugu jira sawir aad u fiican boqortooyadaada dhaqan ahaan. Abuur koolajyadaas adoo adeegsanaya boqolaal sawir shaqsi ah si aad ugu dhex gasho hal final.
Farshaxanada ku dhalatay Canada ayaa iyada dhisto sawirrada gabal gabal ilaa aad ka ogaato inaad ku faraxsan tahay natiijada ugu dambeysa ee midowgaaga. Natiijadu waa curinta hypnotic oo ku dhagan jajabka dhirta, xayawaanka iyo canaasiirta noocyo kala duwan oo panoramas ah oo ah muuqaalka quruxda.
Waxaad dhihi kartaa halabuurkiisu waa a ode dabeecadda inaad naga hor mariso wax qarsoodi ah oo qoto dheer oo ku qotoma dabiicadda dabiiciga iyo adduunyada inagu xeeran.
LeMay wuxuu ku dhashay kuna abuuray magaalada Quebec, Canada. Waxay diiradda saartay shaqadeeda adduunka xayeysiinta muddo 15 sano ah, halkaas oo ay hibadiisa ku beeray muuqaalka, Naqshadeynta garaafka iyo jihada farshaxanka. Iyada oo aan ku qanacsanayn qaab nololeedkeeda, waxay diiradda saartay adduun qancin iyo abaalmarin badan leh sida farshaxanka iyo sawir qaadista.
LeyMay hadda waxay leedahay a mudnaanta sare ee noloshaada jooji kolajyadaada. Asalka qaybahaas ay iyadu abuurtay ayaa u oggolaanaysa iyada inay fahamto isku darka midabka iyo wada noolaanshaha ay awood u leedahay inay ku darto sawirradeeda aadka u xiisaha badan oo soo jiita indhaha daawadayaasha.
Sida abaalmarinta dabeecadda, mid kasta oo sawirada ah kumanaan ka kooban, sheeg hal sheeko oo leh walxo si uun xiriir u leh. LeMay wuxuu fuulaa boqolaal qaab iyo midabba si uu u sameeyo shaashado janno oo xilliyada qaarkood noqon kara nolosha qofka.
Fanaaniintan reer Canada wuxuu dhexgalay shabakadaha bulshada ka facebookaga y uu instagram, laakiin sidoo kale waxay bixisaa suurtagalnimada u dhowaanshaha sawirkaaga boggaaga gaarka ah si aan waxba uga hadhin dhuumaha.
Kahor intaadan bixin fanaan taasi waxay isticmaashaa dabeecadda lafteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Farshaxaniste ayaa ku milmay boqolaal sawir si uu u sameeyo tixgalin dabeecadda
Ma jiraa xad u-lahaanshaha hal-abuurka marka la sameynayo astaanta ugu yar?
Mashiinka DuoGraph ee sameeya sawirro joomatari aan xad lahayn oo uu sameeyay Joe Freedman